Diraa guyyaa fi yeroo of keessaa qabu faayiliin kan itti uumame ykn itti fooyya'e deebisa.
FileDateTime (Barruu akka diraati)
Barruu: Himamsa diraa kammiiyyuu kan faayilii ifa ta'e of keessa qabu. Kanas fayyaduumuu ni dandeessa Sirnasxaa URL.
Faankishiniin kun faayiliin yeroo kam akka uumamee fi yeroo dhumaa kam akka fooyya'e erga murteesse booda haala kanaan "MM.DD.YYYY HH.MM.SS" deebi'a.
Haala walfakaatuun qindaa`ina gitoo biyyaa guyyaa, sa`atii fi sharafa dhangiiwwan irratis ni raawata. Bu`uuri dhangii Lakkadda akkaataa qindaa`ina gitoo biyyaatiin ni hiikama akasumas ni argisiifama.